Vaovao - inona ny aloky ny maso
inona ny aloky ny maso
Eye shadow dia kosmetika izay apetaka amin'ny hodi-maso sy eo ambanin'ny volomaso. Matetika izy io dia ampiasaina hanasongadinana ny mason'ilay mitondra azy na hanintona azy kokoa.
Manampy ny halaliny sy ny refin'ny mason'ny olona ny aloky ny maso, mameno ny lokon'ny maso, na misarika ny maso fotsiny ny maso. Ny aloky ny maso dia misy loko sy loko maro samihafa. Matetika izy io dia vita tamin'ny vovoka sy mika, nefa azo jerena ihany koa amin'ny endrika ranoka, pensilihazo, na mousse. Ny sivilizasiona manerana an'izao tontolo izao dia mampiasa aloky ny maso - indrindra amin'ny vehivavy, fa amin'ny lahy koa indraindray.
Ao amin'ny fiarahamonina tandrefana dia hita ho toy ny tarehy kosmetika izy io, na dia ampiasain'ny lehilahy aza. Eo ho eo, ny elanelan'ny volomaso sy ny volomaso dia avo roa heny amin'ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy. Ny aloky ny maso hatsatra dia manitatra ity faritra ity ary misy vokany amin'ny vehivavy. Amin'ny lamaody Gothic, aloky ny maso mainty na toy izany koa ny maizina ary ny karazana makiazy maso dia malaza amin'ny lahy sy ny vavy.
Betsaka ny olona mampiasa aloky ny maso mba hanatsarana ny bika aman'endriny fotsiny, fa matetika ampiasaina amin'ny teatra sy lalao hafa koa izy io, mba hamoronana endrika tsy hay hadinoina, miaraka amin'ny loko mamirapiratra ary mampihomehy mihitsy aza.
Miankina amin'ny lokon'ny hoditra sy ny zavatra niainany, ny vokatry ny aloky ny maso dia matetika mamoaka glamor ary misarika ny saina. Ny fampiasana aloky ny maso dia manandrana mamerina ny aloky ny maso voajanahary izay asehon'ny vehivavy sasany noho ny pigmentation voajanahary eo amin'ny hodi-masony. Ny aloky ny maso voajanahary dia mety miainga na aiza na aiza manomboka amin'ny famirapiratany mamirapiratra ka hatrany amin'ny hodi-mason'ny olona, ​​amin'ny endrika mavokely, na amin'ny fijery volafotsy aza.